Ngo chess, kukhona aseqala okuthakazelisa kakhulu - ukuzivikela YeNkosi Indian. Lona ekuqaleni isigamu-ivaliwe. Lokhu kusinikeza ithuba ukwakha isikhungo eqinile mhlophe ukwenza wokusetshenziswa okusebenzayo we ezinhlangothini. Lapho exchange of pawns phakathi ibhodi ukulondoloza amahle ukudlala figural. Ngokuphathelene abamnyama, ke bekwazi ukubeka ngempumelelo ingcindezi ngqo verticals semi evulekile.
Isethi labadlali isikhathi eside ukuhlola okuhlukile kuvulwa. umnikelo othile ukuba ukuthuthukiswa kohlelo yethulwa futhi abadlali yasekhaya, phakathi okuyinto ivelele: Anatoly Karpov Aleksandr Alehin noLeo Polugayevsky. Ekusebenteni, kuphela ezimbalwa ongakhetha kuzo ziye zasetshenziswa ngenkuthalo.
Kulokhu, lo white ukuqala eceleni zonke izimiso uhlobo. Bakha isikhungo eziseqophelweni pawns, kuyilapho kokuthandana izibalo asebenzayo phezu kingside. Lokhu kwenziwa ngoba castling iDemo. Ukungezwani phakathi ibhodi kwenza kube nzima abaphikisi ohlangothini ukuthuthukiswa inkosikazi iphinde ivimbele kungenzeka counterplay.
Kahle kahle, Indian YeNkosi njengoba White kusikisela kwaqedwa egcwele ingxenye yenkosi. Ukuhlaselwa Kwakhiwa kusukela flank, lapho indlovukazi. izingcezu Black sika kusadingeka izinketho eziningana for ukusetshenziswa counterplay. Uma kudingekile, ubudala zingase zikhalele zonke izinhlobo kwezinso, kodwa abalona imbangi ayinkimbinkimbi ezifana uhlelo we-classic.
Lapho usebenzisa i-ezakhiwe yesimanje ngokuvamile enawulungiselelwa umdlalo nzima kakhulu. Yilelo naleloqembu liyadingeka umsebenzi nokugcwaliseka uhamba eqondile kakhulu. Njengomthetho, ephumelelisa ukunqoba nguye othola ngobuthakathaka isitha kwenye flank, kuyilapho ekuphatheni usongo komunye.
Friedrich Sämisch uhlelo
Omunye eziyingozi kakhulu uyinqaba YeNkosi Indian kwabamnyama, umdlalo kusekelwe kuhlasela White sika phakathi, usebenzisa counterattacks, aphethwe ngokuvamile ngemva castling. Lena ngokuyinhloko ngenxa yokuthi kungenzeka ukulondoloza Tempo ukudala ukuqala ngokushesha. Njengoba omunye indlela nezimo kakhulu ekuthandeni Ukuvikelwa, okuvumela ukuthuthukisa knight cell C6. izingcezu Black kuleli cala, ngaphansi kwezimo ezithile, bangase bacabange pawns. White kufanele kungagcini umdlalo nokunokuthula ngokuzinikela ubambe castling esifushane noma ukuqhuba pawns okuhlaselayo. Black ezimweni zombili kukhona amathuba kakhulu sokuthuthukisa counterplay.
Kukhona Defense a YeNkosi Indian, okuhloswe ngazo nokucindezela esiphikisayo kuhlasela abamnyama. Promotion uqhutshwa phezu amaseli F7 - F5 futhi e7 - E5. Kufanele kuqashelwe ukuthi isu yentuthuko White is ikakhulukazi senzelwe exchange of izingcezu esindayo. Isakhiwo abasafufusa we pawns nenkululeko lapho Ingcenye ephakathi isithembiso mhlophe esigabeni sokugcina inamathuba.
Le nguqulo best of the game for Black kungaba okusheshayo ubhidliza ezimhlophe ngokuqondile phakathi nensimu. umsebenzi omkhulu kuphela izibalo lihambisana izindlela Tactical kubasiza ukuba silondoloze ukulinganisela kohlaka iphathi enjalo.
ukuzivikela YeNkosi Indian ne pawns ezine
Lolu khetho kungaletha inzuzo enkulu yizicucu ezimhlophe kwi chessboard. Nanobe kunjalo, lelisu has nezihibe. Umugqa we pawns constrains ukuhamba izindlovu. Ngaphezu kwalokho, ukwakhiwa kwalo mngcele emaphakathi kuthatha isikhathi. Black ngalesi sikhathi kusheshe akusebenzise amabutho abo. ukuzivikela YeNkosi Indian elisetshenziswa ukubulawa enjalo kubangela izibalo ezimhlophe baqinise abanye isikhungo. Black futhi bafuna ukuba kumkhathaze kokuhilizisana esikhathini esizayo esiseduze, njengoba beye benza inzuzo ekuthuthukisweni. Ekusebenteni, kuba sobala ukuthi ukuhlaselwa emhlophe phakathi ziyasebenza ngempela.
Okuhlukile nge indlovu on ukuthuthukisa G2
Lolu hlelo kuyingozi ngempela futhi kuyinselele master, kanye YeNkosi Indian Defense chess Friedrich Sämisch. Nokho, it is zihlukaniswa ukwehluka. Nge imizamo indlovu flank sicindezelwa maphakathi enkundleni yemidlalo. Lapho zibona ke uyiswa queenside. Isikhundla inkosi ngesikhathi esifanayo kwaqinisa emva castling iDemo.
Ngenxa black okungafani ungafaka isicelo ukhetho zaseYugoslavia, lokusho umdlalo asebenzayo phezu ezinhlangothini ngoba isikhungo ngokwanele enezivikelo eziqinile. Umphumela ukuphela kuyofika kakhulu zincike uma uzosebenza ezimhlophe ngokuphumelelayo usebenzise isikhundla kuqhathaniswa yokwenziwa black knight yiNdlovukazi.
Sesihlole ukuthi abantu, yiziphi izindlela kungenziwa prostroen Indian ukuzivikela WeNkosi. Izinketho, eqinisweni, akusho bhala yonke, kodwa kuphela labo ethembisayo. Futhi ivelele Makogonova uhlelo lapho abamhlophe ozama nomkhawulo bezikhali black kingside, ebe egcina umqondo othokozisayo ngakolunye uhlangothi we chessboard.
Iklayenti Uluhlu: Kusukela copywriting yokuguqula
Zabuya izimbungulu zingaveli? Izimpawu ze-izimbungulu
Medical Family Centre. Novosibirsk, "Toast"
Alexander Balashov - UNgqongqoshe lokuqala amaphoyisa